भर्खरै भयो मुटु कापने दु,र्घटना आमा र छोराको घ’टनास्थलमै मृ’त्यु – Khabar Chautari
प्रकाशित मिति: आइतबार, पौष १९, २०७७ समय: १६:३४:०३
राजविराज / पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको कल्याणपुरमा गए राति भएको दु’र्घटनामा परी दुई जनाको मृ’त्यु भएको छ । मृ’त्यु हुनेमा सप्तरीको खडक नगरपालिका–५ रंजितपुर निवासी ३० वर्षीय वीरेन्द्र दास र उनकी ५० वर्षीया आमा सुद्धनीदेवी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको स १ झ ४८७ नम्बरको टाटासुमो र विप’रीत दिशाबाट आउँदै गरेको स १० प ९०५० नम्बरको दास सवार मोटरसाइकल एकापसमा ठ’क्कर खाएको थियो । सो दुर्घ’टनामा परी मोटरसाइकलमा सवार आमा, छोराको घट’नास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । यता घ’टनाबारे अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरले जनाएको छ ।
पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको स १ झ ४८७ नम्बरको टाटासुमो र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको स १० प ९०५० नम्बरको दास सवार मोटरसाइकल एकापसमा ठ’क्कर खाएको थियो । सो दुर्घ’टनामा परी मोटरसाइकलमा सवार आमा, छोराको घट’नास्थलमै मृ’त्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । यता घट’नाबारे अनुस’न्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरले जनाएको छ ।
तपाई जाडो मौसममा के खाँदै हुनुहुन्छ ? यदी अन्य समयको बेला जस्तै खाइरहनुभएको छ भने कृपया त्यसलाई रोक्नुहोस् !
तपाई जाडो मौसममा के खाँदै हुनुहुन्छ ? यदी अन्य समयको बेला जस्तै खाइरहनुभएको छ भने कृपया त्यसलाई रोक्नुहोस् तपाई हामी मध्ये धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ त्यस्ता फूडहरु बारेमा जसले जाडो मौसममा सजिलै तपाईको स्वास्थ्यलाई स्वस्थ्य राख्न सहयोग गर्नुको साथै प्रतिरोधात्मक क्षमतामा पनि सुधार गर्न थाल्छ । यसलाई भनिन्छ – सुपरफूड । अर्थात् तागतिला खानेकुरा ।यदि हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले राम्रोसँग काम गर्दछ भने, रोगहरुले तपाईलाई छुन सक्ने कारण हुँदैन ।
पुस लागेसँगै जाडो पनि अत्याधिक बढ्दो छ । यो मुटुकाम्ने जाडोमा पनि सुपरफुड हुन त्यो बदाम होस् वा ओखर वा काजु ती सबैमा ‘ओमेगा फ्याटी’ र धेरै खनिजहरु पाइने फूड हुन्, वैज्ञानिकका अनुसार तपाईको उर्जालाई बढाउने मात्र होइन शरीरलाई न्यानो पनि दिन्छ ।जाडोमा तारेको र भुटेको खानेकुरा खाँदा पेटमा समस्या उत्पन्न हुन्छ ।ती खानेकुराले शरीरलाई न्यानो र स्वस्थ्य राख्छन् र तौल पनि नियन्त्रणमा राख्छन् ।
मह र तातोपानी :वजन घटाउनको लागि अनुहारको चमकदेखि शरीरका टक्सिन फाल्नको लागि सम्म मह र तातोपानी खानुपर्छ । हुन त सबैको घरमा सजिलै उपलब्ध हुने कुरा हो – मह । तातोपानीमा मह मिसाएर खाँदा हाम्रो स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा गर्छ । महमा मिनरल, भिटामिन, फ्लेभोनोइड्स र एन्जाइम भरपुर पाइन्छ । मनतातो पानीमा मह मिसाएर पिउँदा हाम्रो शरीरमा भएको विषाक्त पदार्थ शरीरबाट निस्कन्छन् साथै आन्द्रालाई पनि सफा राख्छ । यसको नियमित प्रयोगले तौल पनि घटाउँछ । यसले छाला पनि सुन्दर बनाउँछ ।
बदाम/आल्डमण्ड :बदाम दुई किसीमको हुन्छ । एकथरी बदाम हामी हाम्रै माटोमा पनि फलाउन सक्छौँ । अर्कोथरी बजारमा किन्न पाईन्छ । बदाममा म्यांगनिज, भिटामिन ई, प्रोटीन, ओमेगा ३ र ओमेगा ६ फ्याटी एसिड लगायत शरीरलाई अत्यावश्यक तत्व पाइन्छ ।अझ आल्मण्ड बदामलाई राती भिजाएर बिहान खाँदा बढी फाइदा हुन्छ । यसको बोक्रामा टयानिन हुन्छ जसले शरीरको पोषक तत्वलाई कायम राख्न सहयोग गनुैका साथै शरीरलाई पनि तातो राख्न पोषण दिन्छ ।
ओटमिल :ओटमिल एकदमै राम्रो बे्रकफास्ट हो । एकदमै कम क्यालोरी र पोषणले भरपुर यसको नियमित प्रयोगले तपाईको शक्ति दिन्छ । यसले शरीरबाट विषाक्त तत्व बाहिर निकालेर आन्द्रालाई समेत स्वस्थ्य राख्छ ।मेवा :आन्द्रालाई स्वास्थ्य राख्नुका साथै मेवाले पेटमा भएको अनेकौँ समस्यालाई हटाउँछ । खाली पेटमा मेवा खानु उत्तम हुन्छ । यसले कोलेस्ट्रोल घटाउनुका साथै तौल पनि घटाउँछ ।
अरु महत्वपूर्ण खानेकुरा के के हुन् ?ल्वाङ, सुकुमेल, दालचीनि, एक टुक्रा अदुवा एक टुक्रा लसुन, एक चिम्टी बेसार राखेको पानी तातो बनाएर पिउने ।बेलाबेलामा ग्रिन टिको सेवन गर्ने पानी प्रशस्त पिउने ।बजारिया, प्लाष्टिकमा प्याक गरिएका, रङ हालिएका, बासी, खानेकुरा नखानेपर्याप्त पानी, फलफूल र सागपातको सेवन गर्ने ।